Boosaaso: Askari toogasho ku dilay laba askari oo kale
Kooxda QM ee Somalia oo warbixin soo saartay
Askari ka tirsan ciidamada badda maamul goboleedka Puntland ayaa habeenimdii xalay magaalada Boosaaso ku dilay laba askari oo ciidamada Badda maamulka Puntland ay ka wada tirsanaayeen. Askariga ayaa la sheegay in askarta geeriyootay uu raas ku furay iyaga oo kuwada jira hawlga ay amaanka ku sugayaan. Qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Badda Puntland oo […]
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa la fiilayaa inay maanta cunaqabataynta ka qaadaan Eritrea, balse lama filayo in sidaasi oo kale cunaqabataynta laga qaado Soomaaliya. Guddigii Cunaqabataynta Qaramada Midoobay ayaa iyagana la rajaynayaa in lagu soo koobo koox qaabilsan Soomaaliya oo keliya. Warbixin ku saabsan mowduucyada ugu waa weyn ee ay warbixintaasi ka hadashay waxaa […]